ယူနိုက်တက်မှာဆက်ရှိဖို့အတွက် ဆိုးလ်ရှားဆီမှာ အရည်အချင်းမရှိဘူးဆိုတာ သက်သေပြခဲ့တဲ့ပွဲ | Duwun
ယူနိုက်တက်တို့ အိမ်ကွင်းမှာ အဲဗာတန်ကို အနိုင်မကစားနိုင်ဘဲ တစ်ဂိုးစီသရေကျခဲ့တာပါ။
ဆိုးလ်ရှားက ဘယ်လိုနည်းပြလဲ? ဆိုးလ်ရှားနဲ့ ခရီးဆက်နေရင် ယူနိုက်တက်က ဒီရာသီမှာ ဘယ်လောက်အထိ ပေါက်မြောက်နိုင်မလဲ? ဒါတွေကို ဖြေပေးခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါပဲ။
ဒီပွဲမှာ မလိုအပ်ပါဘဲနဲ့ လူစာရင်းကို အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်။ ရော်နယ်ဒို၊ ပေါ့ဘာတို့ မပါလာဘဲ မာစီရယ်လ်၊ ဂရင်းဝုဒ်၊ ကာဗာနီတို့ကို အမာခံထားပြီး ကွင်းလယ်မှာ သူ့စိတ်ကြိုက် တွမ်မီနေးနဲ့ ဖရက်ဒ်တို့ကို ပွဲထုတ်လာခဲ့တယ်။
အဲဗာတန်လူအင်အားက တော်တော်လေးအားနည်းပါတယ်။ တိုက်စစ်မှာ အဓိက, ကစားသမားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရစ်ချာလီဆန်ရော၊ ကဲလ်ဗတ်လီဝင်ရော မပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက်တို့ အပြောင်းအလဲလုပ်လာတယ်ဆိုတဲ့ လူစာရင်းက အဲဗာတန်ရဲ့ အခုလူစာရင်းထက် အပုံကြီးသာပါသေးတယ်။
ပွဲအကြောင်းပြောရရင် ယူနိုက်တက်ရဲ့ အသင်းလိုက်ကစားအားက တစ်ယောက်စ၊ နှစ်ယောက်စရုန်းနေလို့သာ နည်းနည်းလေးရုပ်ထွက်တယ်ပြောရမှာပါ။ မာစီရယ်လ်အတွက် ပြောစရာက ဦးဆောင်ဂိုးသွင်းသွားတာ တစ်ခုတည်းပါပဲ။
တစ်ပွဲလုံးမှာ လုံလောက်တဲ့၊ ထိရောက်တဲ့ ကစားပုံကို လုံးဝမပြသနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒုတိယပိုင်းမှာ တန်ပြန်တိုက်စစ်ကတစ်ဆင့်ပဲ တောင်းဆန့်ရဲ့ချေပဂိုးကို လွယ်လွယ်ကူကူခွင့်ပြုလိုက်ရပါတယ်။ ဒီဂိုးမှာ ဘယ်သူအားနည်းခဲ့လဲ၊ ဘယ်သူဆီက အစပြုခဲ့လဲ အားလုံးအမြင်ပါ။ ဆိုးလ်ရှားရဲ့အတွေးတွေက နောက်တစ်ဆင့်ကို ရောက်နေပြီ၊ ဘယ်သူမှလိုက်မမှီတော့ဘူးဆိုတာ အခုချိန်မှာ သာမန်စနောက်တဲ့စကားမဟုတ်ဘဲ အမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။
လီဗာပူး၊ မန်စီးတီး၊ ချဲလ်ဆီးတို့နဲ့ ယှဥ်လိုက်ရင် ယူနိုက်တက်ရဲ့ အသင်းလိုက်စုဖွဲ့ကစားပုံက အင်မတန်အားနည်းလွန်းပါတယ်။ ဒါက ဟိုလူမပါလို့၊ ဒီလူမပါလို့ဆိုတာထက် ရော်နယ်ဒိုရော၊ ပေါ့ဘာရောပါသည့်တိုင် အသင်းရဲ့ အနေအထားက ဒီပုံစံအတိုင်းသွားနေတာပါ။ ဗီလာကိုရှုံးတဲ့ပွဲမှာ ဒါကိုမြင်ရတယ်၊ ဗီလာရီးရဲယ်နဲ့ပွဲမှာ သရေကျမလိုဖြစ်ပြီးမှ နောက်ဆုံးမိနစ်မှာ ပြန်နိုင်လိုက်တယ်၊ အခု ဒီပွဲမှာလည်း အလားတူပါပဲ။ အသင်းက ကံဇာတာမကောင်းရင်၊ တစ်ဦးချင်းအလိုက် ချွန်မထွက်လာရင် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် မျှောကစားနေတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ် အိမ်ကွင်း (၂) ပွဲဆက်မှာ၊ ကိုယ့်ထက်အင်အားအပြတ်နည်းတဲ့ ဗီလာ၊ အဲဗာတန်တို့နဲ့ပွဲမှာ အမှတ်တွေလျော့ခဲ့တာ စိတ်ပျက်စရာပါ။ ဒါတောင် ဒီပွဲမှာ ဗီလာနဲ့ကလိုပဲ ပွဲပြီးခါနီးမှ ပြိုင်ဘက်က လူကျွံနေလို့ အနိုင်ဂိုးမပေးရတာ ကံကောင်းပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ရဲ့လက်ရှိအနေအထားက ဘယ်ဆုဖလားကိုမှ မှန်းလို့မရပါဘူး။ ပီတာရှမိုက်ကယ်က ယူနိုက်တက်မှာ ဆိုးလ်ရှားထက် ပိုသင့်တော်တဲ့နည်းပြရှိလားလို့ သူမေးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဆိုးလ်ရှားနဲ့ဆက်သွားရင်လည်း ဒီအသင်းက ဘာဆုဖလားမှရမယ့်အသင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ရာသီအစောပိုင်းမှာ ဒီလိုပြောလို့ လွန်တယ်မထင်ပါနဲ့။ မဟာဗျူဟာဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတဲ့ ဆိုးလ်ရှားနဲ့ ခရီးဆက်နေရင်၊ သူ့စိတ်ထဲ ထင်ရာမြင်ရာတွေ လျှောက်လုပ်နေသရွေ့ ဒီအသင်းက ဆုဖလားတွေနဲ့ဝေးကွာနေဦးမှာပါ။